Waxyaabihii ay qaban kari weyday City ayaa ahaa in ay ciyaarta ka dhigto mid amaan ah kadib markii ay Raheem Sterling iyo Agüero ay ka hor mariyeen, laba jeer. Spurs ayaa si dhib yar ku heshay dhibic ay ka heshay
Waxa uu ku andacooday in loo sheegay inay tahay inay ciyaaraan ciyaarta. “Waa qoomamo dhab ah iyo dareen qoto dheer oo jahwareer ah oo nagu qasbay inaan dib u dhigno kulanka ka dhanka ah Doncaster Rovers. daryeelka koox dhalinyaro ah
Difaaca ayaa ahaa waaxda kaliya ee Everton aysan maal gashan xagaagan, Marco Silva ayaa galay ololahan cusub isagoo muujiyay walaac ku aadan maqnaanshaha qeybta dhexe ee natiijada. Ma uusan hayn wax sabab ah oo ashtako ah tan iyo markaas. Safka
Qayb weyn oo ka mid ah waxa Saracens si fiican u qabato isla markaana la mid ah Wales, Williams wuxuu ahaa mid aad u qurux badan oo awoodiisa inuu ka ciyaaro garabka ayaa fure u ahaa, sida lagu arkay Ireland.
Ciyaarta Kibirka ayaa si dhakhso leh u noqotay qayb muhiim ah oo ka mid ah jadwalka horyaalka. Isku soo wada duubnaanta ku jirta waxay ka tarjumaysaa tan kubbadda haweenka si ballaaran, laga soo bilaabo gunta hoose. Dareenka Whitten Oval galabnimadii
Rust waxaa iimayl u diray qof tartamaya oo soo jeediyay in codka kalsoonida laga yaabo in loo yeero toddobaadyada soo socda. “Aniguna sidoo kale waan maqlay,” ayuu Rust ku qoray jawaab uu arkay Mas’uulka, wuxuuna raaciyay digniin. Waxay noqon doontaa
Guuldarradii ka soo gaartay Kevin Durant, Andre Iguodala iyo Shaun Livingston ayaa hoos u dhigay shantii difaac ee difaacaneysay tartamada Galbeedka, kuwaas oo aan aheyn kuwa ugu cadcad koobkii ay gali jireen xilli ciyaareedyadii ugu dambeeyay. Laakiin saxiixa Saxiixa Klay
Kirikriki Irish wuxuu da ‘ahaan ku dhacaa Sayidka ka dib markuu xumaaday, oo uu maroojiyo odyssey
Hepley Tector, madaxweynaha kooxda naadiga cricket-ka YMCA, waa naadir sharaf leh oo ku nool Sandymount. , Dublin. “Sayidku waa halka ugu wanaagsan ee ciyaarta cricket-ka lagu ciyaaro. Rabbi waa meherka. ” Xubnaha akadeemiyada cricket-ka YMCA ee ‘YMCA’ waxay ku raaxeystaan
Jason Roy wuxuu waxyeeli karaa Ashes sheegashada maadaama ay Ireland bartilmaamed sagxad kale ah
Ciyaarta, oo bilaabaneysa Arbacada, waa inay noqotaa mid diirimaad qabow leh dambaska Ashes. Marka laga reebo in dagaalkuhu leeyihiin hab ay ku qaniinaan magacyo waaween dhinaca dambe. Sayidku wuxuu ka soo socdaa wadada Kilburn, oo ah dhaqan Irish oo caado
Nice ragga ma rabsho: Halganka ‘wanaagsan’ taageere isboorti Canadian
Daabacaadda daabacaadda sabtida ee ‘Star Star’ ee qof walba dhabarkiisa ku xardhan: “Toronto, wanaag baad sameysay,” ayaa lagu dhawaaqay. “Booliisku diyaar bay ahaayeen markii tobanaan kun ay waddooyinka ku daadinayaan,” ayaa lagu qoray wargaysku, “laakiin marka laga reebo dhawr dhacdo